Sawirro: Xaflad lagu daah furayay sharciyada degmooyinka Soomaaaliya oo ka dhacday magaalada Baydhaba
arlaadi July 12, 2017 No Comments
Xaflad lagu daahfurayay sharciyada degmooyinka dalka oo ay kasoo qaybgaleen maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa ka dhacday magaalo madaxda gobolka Bay ahna xarunta KMG dowlad goboleedka Koonfur galbeed.
Xafladaan ayaa waxaa daah furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayada oo ay kasoo qaybgaleen wasiirada arimaha gudaha maamulada kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeele iyo wasiiro kuxigeenada arimaha gudaha Jubbaland iyo Puntland.
Waxaa sidoo kale kasoo qayb galay wasiir kuxigeenka arimaha gudaha iyo federaalka dowlada federaalka Soomaaliya, xoghayaha joogtada ah ee wasaarada, safiirka Finland u qaabilsan Soomaaliya, wakiilo ka socday UNSOM, AMISOM, EU iyo dalalka daneeya arimaha Soomaaliya.
Daah furka sharciyada degmooyinka ayaa waxxaa lagu daah furay degmooyinka Berdaale, Ceelberde iyo Xudur ee gobolada Bay iyo Bakool.
Xaflaldda daah furka ahayd ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, golahah wasiirada maamulkaas, xildhibaano iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekhh Aadan ayaa waxa uu shahaado sharaf gudoonsiiyay wasiirka arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan (Satte)